DFS oo sheegtay in howlgal lagu dilay Xubno ka tirsan Al-Shabaab | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta DFS oo sheegtay in howlgal lagu dilay Xubno ka tirsan Al-Shabaab
DFS oo sheegtay in howlgal lagu dilay Xubno ka tirsan Al-Shabaab
Howlgal qorsheeysan ayaa la sheegay in Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kasameeyeen degaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay ku sugnaayeen Xubno ka tirsan dagaamayaasha Ururka Al-Shabaab.
Ciidamada ayaa degaananda ay howlgalka ka sameeyeen kamid ah, degaannada Wala galeen ,Galka saalimow, Dahaad ,Ceel maracade Garas Gawaan oo katirsan gobolka shabeelaha hoose, waxaana degaannadaas uu dagaal ku dhex-maray Ciidamada dowladda & Al-Shabab.
Taliyaha Ciidanka Dhulka Xoogga Dalka Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa u sheegay Idaacadda Codka Ciidamada in howlgalkaas lagu dilay 11 Xubnood oo ka tirsan Ururka Al-Shabaab oo uu kamid yahay Sarkaalkii watay Xubnahaas, halka ay ku dhaawaceen 6 Xubnood oo kale.
Taliyaha ayaa intaasi kudaray in Ciidanka ay bur-buriyeen goobo Al-Shabaab dadka lacagaha ay uga qaadi jireen, isla markaana weli howlgallada ay yihiin kuwo sii socda.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa mararka qaar waxaa ay howlgallo qorsheysan ka fuliyaan degaano ka tirsan Gobolada Jubbooyinka & labada Shabeelle, hayeeshee inta ay howlgalka ku jiraan waxaa ay weeraro kala kulmaan Xubno ka tirsan Al-Shabaab.